IDaughters of the Cloth Village, uhhafu we-Anne Jacobs trilogy | Izincwadi Zamanje
Amadodakazi edolobha lezindwangu.
Amadodakazi esigodi sendwangu yingxenye yesibili yetrilogy yombhalo eyenziwe ngumbhali waseJalimane u-Anne Jacobs. Yashicilelwa ekuqaleni ngo-2015, yize bekungeke kube yiminyaka emithathu kamuva lapho ukuhunyushwa kweSpanishi kungafinyelela ezitolo ezidayisa izincwadi. Kungumdlalo ongokomlando othatha obala izingxabano eziphakathi kwamaCrawleys nezisebenzi zawo njengomthombo wazo wokugqugquzela. Umphumela waba impumelelo enkulu emphakathini kanye nabagxeki abakhethekile.
Indlela yokusondela ezindabeni ezimayelana nobukhosi baseYurophu ngasekupheleni kwekhulu leshumi nesishiyagalolunye nasekuqaleni kwamashumi amabili ishintshe kakhulu ngemuva kuka-2010. Wakhululwa ngalowo nyaka Downton Abbey, Olunye uchungechunge lwethelevishini lwaseBrithani oluphumelele kunazo zonke ezake zenziwa ngumbhali wesikrini owina u-Oscar uJulian Fellowes Impumelelo ebabazekayo yalokhu kukhiqiza idilize ipharadayim endala: (okuthiwa) amadrama omlando awathengisi.
1 Mayelana nomlobi, u-Anne Jacobs
1.1 Ithalenta elifihliwe
2 Idolobhana lezindwangu, incwadi eyashintsha konke
3 Ifa lomzana wezindwangu: okwangempela ngaphambi nangemva kwalokho
4 Ukuphikisana kwamadodakazi omuzi wezindwangu
5.1 Ukuhlanganiswa okusebenzayo
5.2 Okungeyona eyasekuqaleni?
5.3 Umlando njengokwasemuva
6 Inoveli eye yaba nomthelela
Mayelana nomlobi, u-Anne Jacobs
Wazalwa ngo-1941, eLower Saxony, ngaleso sikhathi izwe elingumbuso omkhulu kunawo wonke eJalimane. Umbhali ube nomona ikakhulukazi ngokuvikelwa kwempilo yakhe yangasese, yingakho imininingwane ingekho. Akukho okuqinisekile mayelana no-Anne Jacobs. Phakathi kwabo, izifundo zakhe zomculo nezilimi. Futhi, isikhathi eside wazinikela ekufundiseni njengothisha wesikole samabanga aphakeme.
Umsebenzi wokubhala (kodwa hhayi umsebenzi) wamfinyelela eminyakeni yobudala. Imisebenzi yakhe yokuqala yashicilelwa ngasekupheleni kwekhulu lama-XNUMX, lapho ethatha isinqumo sokuzinikela ngokuphelele ezincwadini. Amaphuzu amanoveli omlando amvumela ukuthi athole ukuzimela kwezezimali ngokudinga ukubhala kuphela. Yize kukude ekuqashelweni komphakathi, ngoba wasebenzisa amagama-mbumbulu amaningana ukuze ahlale emathunzini.
Idolobhana lezindwangu, incwadi eshintshe konke
Ngo-2014 uthathe isinqumo sokushicilela ngaphansi kwegama lakhe langempela. Ubengakwenza ngesahluko sokuqala salokho akubonile ezingxoxweni ezahlukahlukene, wayehlala ekhulelwa njenge-trilogy. Idolobhana lezindwangu yayithengisa kakhulu ngokuqonda. Noma kunjalo, lesi sihloko sazuzela uJacobs indawo evelele phakathi kwababhali banamuhla baseJalimane. Ukubuyekezwa kwabafundi bekunomdlandla impela, yize abanye abagxeki bavele bayibheka njengencwadi "yeprose eyiyo".
Ngemuva konyaka, kwaba nokwethulwa kwe- Amadodakazi edolobha lezindwangu, ukuthandwa kwakhe kwenza u-Anne Jacobs abe ngumbhali kaningi phakathi komphakathi wamaTeutonic. Ngalo mbhali umbhali ukhombise ikhono lakhe lokwethula inganekwane phakathi kwempi yomlando yangempela: Impi Yezwe Yokuqala. Ngaphezu kokwenza indaba yomculo wekhwaya eningiliziwe, okungukuthi -ngaphandle kokugxila kubo bonke abalingiswa bayo— egcina ukufana okuphelele.
Ifa lomzana wezindwangu: okwangempela ngaphambi nangemva
Ukuvalwa kwe-trilogy kwashicilelwa (ngesiJalimane nangeSpanish) ngo-2019. Yize uJacobs ethole impumelelo ebonakalayo phesheya ngezitolimende zangaphambilini, ukuzinikezela kwakhe "kwasekhaya" kuze kwafika Ifa lomzana wezindwangu. Ngendlela, impumelelo ekuthengisweni kwalokhu isho isidingo esikhulu sabangaphambi kwayo.
Abafundi abajwayelekile bendaba kaMelzer bajabule ngokuphela. Kubo, “ukufika sekwedlule isikhathi” kwakuyinto eyindumasi. Indaba entsha nejabulisayo, ecebile ngezinsizakusebenza namafomula asevele ahlolwa, kepha asasebenza kahle.
Ukuphikisana kusuka ku- Amadodakazi esigodi sendwangu
Isithabathaba somuzi esikhulu sase-Augsburg saphenduka isibhedlela sempi esisebenza njengesigaba esiyinhloko. Ifektri yezindwangu ithatha enye indawo “yesehlakalo”. Kanye namadrama avuswe phakathi kwabalingiswa - ahlala ekhona izingxabano ngobuhle obukhona ebuhlotsheni babantu - bekungagwemeki ukufaka into enkulu: The Great War. Kwenzeke kumongo lapho isiqu esithi "iMpi Yezwe I" sasingekho ngempela, ngoba phakathi nale mpi, akekho owayecabanga ukuthi kuzoba nokulandelana.
Phakathi kwezintelezi zesizinda somlando wezinganekwane ukuqiniswa kokuqina. Ngakolunye uhlangothi, iqiniso "langempela" nelingabazeki, wonke umuntu azi ngalo imiphumela yalo (okungenani kancane). Ngakolunye uhlangothi, abanye abalingiswa okulula ngabo ukuthuthukisa uzwela. Ngakho-ke, umfundi uthola owesifazane oyingozi, umsizi omuhle futhi onemali, inhlekelele yomndeni, ufisa ukwenza ngcono ... nezimfihlo zomndeni ezinkulu nezinamahlazo.
Ukusebenza kahle nesitayela esikhonjiswe nguJacobs ukuxuba zonke lezi zinto, yizici ezahlukile ezenza i-trilogy yakhe ikhetheke. Lezi zinto zibonakala kakhulu esahlukweni esiphakathi, Amadodakazi esigodi sendwangu. Kubabhali abaningi, ukusinda ezingxenyeni zesibili akulula ngaso sonke isikhathi. Yize kunjalo, uJacobs uphasa ngo-A.
Akugcini nje ngokuthuthukisa umoya othuthukiswe ngesitolimende sokuqala, yena, kanjalo, ngokweqiniso ekwakhiweni kwe-trilogy, ukhombisa amandla aphawulekayo "okwenza mnyama isibhakabhaka" sezinhlamvu zakhe. Iqiniso elilula lokuphila liba ngumsebenzi we-titanic, lapho uthando (uthando njalo) lungasebenza njengokugcoba nobuthi.
Ngokuvamile, yonke i-trilogy ye- Idolobhana lezindwangu iwela kulokho esingakubiza ngokuthi "inoveli efanele." Impela, ikakhulukazi Amadodakazi endlu yezindwangu. Kodwa-ke, ngezinga elithile umbhali kuthiwa akanakho okwakhe. Lokhu kuyinkinga? Impendulo emfushane ithi cha. Yize kukhona (okusobala) ukungabikho kwezinto zomanoveli nokumangazayo, le ndaba ayikhombisi imigodi.
UJacobs ucwaninga ngezincazelo zabalingiswa bakhe, ikakhulukazi imizwa yabo. Ngale ndlela, umbhali weSaxon akagcini nje ngokugcina intshisekelo esiqeshini, futhi ufeza nokukhula kwabaphikisi. Ngasikhathi sinye, isebenzisa amagama ahlanzekile, aphawuleka ngokushelelayo (ngaphandle kwenani elikhulu lemininingwane namagama), kungabikho ndawo yokudideka.
Ngokuvumelana nomsebenzi wakhe wokufundisa, Umbhali ubuye asebenzise nendaba yakhe ukwenza umzuzu obalulekile emlandweni waseJalimane owaziwa yingxenye enkulu yomphakathi. Impela, ayinakuchazwa njengenoveli yempi, noma kunjalo, Amadodakazi esigodi sendwangu inikeza ukubuka konke ukuthi umphakathi waseJalimane, bobabili abasebukhosini kanye nabasezingeni eliphansi kwezomnotho baphila kanjani ngempi eyashintsha umhlaba unomphela.
UJacobs ukholelwa ngokuqinile ezindabeni eziqanjiwe - Ngokwakhe, emanovelini "omlando oyinganekwane" - njengezindlela ezizwakalayo zokusabalalisa amaqiniso athile emphakathini. Le yimicimbi ekhombe isizukulwane futhi yaguqula umhlaba unomphela. Ngaphezu kwalokho, ngemuva kokufunda i-trilogy, abafundi banelukuluku lokuthola ngokuningiliziwe izehlakalo ezenzeke ngalesi sikhathi.
Ukucaphuna kuka-Anne Jacobs.
Inoveli eye yaba nomthelela
Abagxeki njalo badlala indima ebalulekile lapho bekhuluma nganoma yikuphi ukubonakaliswa kobuciko. Kepha lapho ubuciko nezentengiselwano kuhambisana, njengakwimboni yokushicilela, into ebaluleke kakhulu ukusabela komphakathi. Ngakho-ke, endabeni ka-Anne Jacobs no Amadodakazi edolobha lezindwangu, impendulo iyavumelana: iyinoveli efanele ukufundwa.
Ukubuyekezwa okuhle kubuye kusekelwe yizinombolo zamakhophi athengisiwe: amakhophi angaphezu kwezigidi ezi-3 emhlabeni jikelele. Ngakho-ke, Noma ikuphi ukungabaza kuyasuswa ngaphambi kwalesi simiso esilandelayo: kuyimpumelelo yombhalo ngayo yonke indlela yesisho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amadodakazi esigodi sendwangu